Ama-comics ama-intanethi kwi-intanethi: jonga ngokukhululekile kwi-russian | 2018 ngonyaka
Iimifanekiso zama-Porno ngesiRashiya
Imifanekiso yemifanekiso yabadala ngumfanekiso othakazelisayo, izixhobo zoncwadi zidibanisa. Iimifanekiso ezihlaziyiweyo ze-porn iyimifanekiso ephilileyo ekhutshwe kwividiyo enye, ukongezwa kwemizekeliso yesicatshulwa ihamba kunye nombukeli, ukugqiba umlando wombhali owamkelekileyo. Imidwebo yokuqala yobugcisa yomculi inquma isigqibo sekhathuni.
eyona > IiComics
I-Captain America yikhathuni evela eUnited States
1. Ikhava ekhangayo
2. Isayinini somculi - Usuku
Isiseko script siyi-parody ebonakalayo, umfanekiso wekhwalithi yeqhawe lokuqala. Ukwakhiwa kwamaketanga anengqiqo kwiidyarki, kunika ukhetho oluninzi lweziganeko ezithandanayo. Bonke ababukeli bamaqhawe amaninzi bahendwa ngamathambo akhe abonwa ngongxowankulu. Umculi ukhetha iividiyo ezithandekayo, ngokusekelwe kwizinto ezikhethiweyo, inkosi yenza umzobo owenza umfanekiso opheleleyo. Amabali amatsha amancinci kwimifanekiso, ulwazi kwifu elimhlophe elijikelezayo, udlulisela izenzo ze-narrator. Ubungakanani bonyulwa kwi-oda engabonakaliyo, kulula ukubonisa intsingiselo ye-parody.